Doorashooyinka ka dhacaya Faransiiska Abriil 24, 2022 – JucelinoLuz
Emmanuel Macron ama Marine Le Pen
Águas de Lindoia, Abriil 16, 2022
Marka la eego xaaladda siyaasadeed ee qaran ee ka jirta Faransiiska, waxaan caddaynayaa in xaaladda hadda jirta ee ku-meel-gaadhka madaxweynanimada aysan saameyn ku yeelaneynin wax-qabadkeyga sida lataliye ruuxi ah ama mid aan caadi ahayn, sida ay inta badan iigu yeeraan, tan iyo cilmi-baaris cilmiyeed oo ku salaysan Parapsychology. ayaa shaaca ka qaaday in heerka garaaca ee ku saabsan 7% (boqolkiiba todobo) ay ku filan tahay in lagu qiimeeyo heerka sare ee paranormality, iyo waxa la yiraahdo marka afku uu ku dhufto qiyaastii 70% (boqolkiiba sagaashan) ee saadaasha, sida ay tahay kiiskayga! Dadku had iyo jeer waxay doortaan waxa iyaga ku habboon, taas oo muujinaysa fursadda ugu badan ee isbeddelka, si kastaba ha ahaatee, tani weligeed weligeed ma dhicin – sababtoo ah dhammaantood (siyaasiyiin, iyada oo aan guud ahaan) waxay qayb ka yihiin isla ciyaarta danaha.
Halkan waxaan ku haynaa Emmanuel Macron oo ah siyaasi Faransiis ah, shaqaale dawladeed iyo bangi, xubin ka ah xisbiga shuuciga ee 2006 ilaa 2009. Guud ahaan, Macron waxaa loo arkaa inuu yahay dhexdhexaad, qaar waxay ugu yeeraan xorriyadda bulshada, halka qaar kalena ay ku tilmaamaan inuu yahay dimoqraadiye bulsho. Mudadii uu ka tirsanaa xisbiga hantiwadaaga Faransiiska, waxa uu ka tirsanaa garabka dhexe ee dhaqdhaqaaqa, kuwaas oo siyaasadooda lagu tilmaami jiray “hab saddexaad”, aragtidaas oo inta badan lala xiriiriyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin Bill Clinton, Tony Blair iyo Gerhard Schröder. Taasi waa, “laga bilaabo bidixda”
(Doorashadii ka hor waxa uu sheegay in kuwa aan la tallaalin aanay Qaranka ka tirsanayn – yacnii Faransiis ma ahayn, dabadeed waxa uu beddelay hab-dhaqankiisii ​​khilaafkii doorashada madaxtooyada, waxa uu yidhi si kalgacal leh!?- si yaab leh ayuu isu beddelay. si deg deg ah! )
Dhanka kale, waxaan haynaa Marion Anne Perrine Le Pen, oo loo yaqaan Marine Le Pen, waa qareen iyo siyaasi ka tirsan midigta fog ee Faransiiska. Xubin ka tirsan baarlamaanka Yurub intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2017, waxaa loo doortay madaxweynaha xisbiga National Front 16 Janaayo 2011, iyadoo bedeshay aabaheed, Jean-Marie Le Pen. Waxa kale oo ay ahayd xubin golaha deegaanka ee gobolka maamulka Nord-Pas-de-Calais ilaa bishii March 2010 iyo xildhibaan degmada Hénin-Beaumont ilaa March 2008. Si kale haddii loo dhigo, “garabka midig”
“Dadku waxay ka baqayaan isbeddelka sabab fudud; isbeddelku waa wax aan la garanayn, yacni, waa wax aan la garanayn. Waxaa hubaal ah, sababtoo ah waa wax dhici kara, in qofku uusan weli noolaan waxa soo socda, sidaas darteed shaki, ammaan darro iyo cabsi ayaa ah dareenka soo noqnoqda marka laga hadlayo isbeddelka. Isbeddellada ayaa ka kooban hits iyo sees. “
Wax sii sheegiddu kuma darto bidix iyo midig! Oo xataa uma shaqeyso sida ciyaarta kubbadda cagta….
“Masiirka Faransiiska wuxuu ku jiraa gacanta codkaaga.”
Sida iska cad, midkoodna ma noqon doono xalka waddada iftiinka iyo horumarka Faransiiska, si kastaba ha ahaatee, mid iyaga ka mid ah ayaa u baahan doona inuu qaato booska.
Waa dabiici in jawiga rajada uu dhaliyo dhaxalka
Doorashada madaxtinimo waxay had iyo jeer isu muujisaa inay tahay waqti aad u wanaagsan
eedeymaha iyo kala soocida, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan caddeeyo inaanan tafatirin a
kaliya fasiraad maskaxeed ee waxyiga aan helo, laakiin
Waxaan u dhaqmaa sidii kanaal, gaadiid isku xira si aan ula xiriiro dadweynaha guud wixii ku saabsan saadaashayda (waxsii sheegyada).
Waxaa jirta awood loo bedeli karo
jihada, xaqiiqada dhabta ah, iyo suurtogalnimadan, tan
xaqiiqada dhabta ah, jeermiska, waa waxa aan arko, laakiin waxaa jira
kiisaska la bedeli karo (marka wareegyada furan yihiin iyo wixii la mid ah
u oggolow), ficilka aadanaha ama ka-tegidda, iyadoo la adeegsanayo awoodaha
, kuwaas oo aan kaliya ku dhaqmin dusha xaqiiqooyinka, laakiin sidoo kale
daaha dabadiisa ee taariikhda, dhammaan qaybaha nolosha aadanaha, ma aha oo kaliya in garoonka siyaasadda.
Waxaan jecelahay in aan soo qaato abwaankii waardiyihii hore, ee ka hadlaya wax-is-daba-marinta taariikhda.
Ciwaankeedu waa “Taariikhda ama ciyaarta Shataranjiga”, oo si fiican u soo koobaysa marxalada taariikheed ee aynu ku nool nahay, halkaas oo ay xoogag xunxun isku daraan in ay taariikhda wax ka beddelaan, iyaga oo u qaabaynaya hadba danahooda, kuwaas oo inta badan, aan ku habboonayn rabitaanka iyo rabitaanka. baahiyaha dadka: Waxa Faransiisku u baahan yahay waa cusboonaysiinta siyaasadeed, cusboonaysiinta caddaaladda, sababtoo ah, inta lagu guda jiro 53 sano ee noloshayda u heellan xagga ruuxa, waxaan arkay kaliya maamulka iyo siyaasadda oo ka faa’iideysanaya dadka wanaagsan, ma aha oo kaliya Faransiiska, laakiin dhammaantiis meeraha – iyada oo aan la soo koobin – iyada oo loo marayo ballanqaadyo, musuqmaasuq, khiyaano, iyo wax kasta oo ka sarreeya, qaar ka mid ah kuwa isticmaala iftiinka sharciga, ku dhaqanka caddaaladda. Sidaa darteed, ma waafaqsana hadallada iyo eedaha suurtogalka ah ee soo bixi kara mustaqbalka dhow (xaq iyo khalad), mana hayo wax shakhsi ah oo aan midkoodna ku diidanahay (Anigu ma ihi mid ka mid ah dhinacyada siyaasadda, ixtiraamka dhammaan). , wax kasta, waxaan kaliya u dhigayaa waxaan ku jiraa booska hagaha ruuxiga ah ee muwaadiniinta raadinaya jidka iftiinka, ama laga yaabo, raaxada iyo jihada noloshooda mustaqbalka wanaagsan – yaa yaqaan, kombuyuutar, ayaa keeni kara. iyaga jag cusub – sababtoo ah anigu ma hayo mawqif siyaasadeed, dhab ahaantii, kuwa ku nool ka dhiig-miirashada dadka kale, ma heli karaan jidka iftiinka, waxay ku noolaan doonaan weligeed ah ego, raadinta awoodda, kalinimada, luminaya a goobada xunxun, inta badan, oo aan soo noqosho lahayn.
Prof. Jucelino Luz – aragti dheer, qoraa, deegaan-yaqaan, lataliye ruuxi ah
Si aad wax badan u barato , oo aad u sii wadato akhrinta , guji mid ka mid ah xidhiidhada hoose :